Bogga ugu weyn / blog / Ku Samee Qorshe Qurxinta Musqusha Qubayska Musqulaha
2021 / 09 / 27 Qoondayntablog 2206 0
Qasabadda musqusha waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee aad ku dhammayn karto muuqaalka dharka musqusha ama tubbada qubeyska iyo qubeyska. Tiknoolajiyadda qasabadda musqusha ayaa aad u horumarsan, taasoo kuu oggolaan karta inaad si fiican u maamusho biyaha oo ku siiso kalsooni sare. Qasabadaha qaarkood waxay leeyihiin hawsha xakamaynta heerkulka oo aad hagaajin karto si ay kaaga caawiso kahortagga dabka ka dhashay biyo aad u kulul - tan waxaa lagu magacaabaa qasabka kahortagga gubashada. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee la tixgeliyo ayaa ah tayada agabka ay soo -saareyaashu u adeegsadaan samaynta qasabadaha. Xulashada ugu fiican ayaa ah in la isticmaalo naxaas adag ama biraha saldhigga naxaasta ah oo wanaagsan, kaas oo sidoo kale ka caawiya ka hortagga daxalka. Waxaad mar walba heli kartaa qasabadda musqusha oo raqiis ah, laakiin mustaqbalka fog, keydintu ma kordhayso, sababtoo ah waxaad yeelan doontaa qasabadda musqusha ee adeegga nolosha oo gaaban, waxaana laga yaabaa inay jiraan dhibaatooyin badan oo gudaha ah oo aad aakhirka la kulmi doonto. Qasabadaha jaban badanaa waxay isticmaalaan jirridda qaadista si ay u furaan una xiraan waalka. Naqshadeyntaan, dhaqeyaha hoose ee asalka waalka ayaa si dhaqso ah u xirmi doona ugu dambayntiina qasabadda qubeyska musqusha ayaa soo daadan doonta. Moodooyinka cusub ee leh qasabadaha, doorashada ka fiican waa waalka gasket -ka lahayn. Kuwani waxay isticmaali doonaan cajalladaha dhoobada iyo kartridda khad waxayna u muuqdaan inay yihiin xulasho caan ku ah qasabadaha musqusha iyo tubbada qubeyska iyo qubeyska. Sababtoo ah uma badna inay daadan doonaan sida qasabadaha qasabka ee wax lagu riixo, waxaad ugu dambayn heli doontaa qasabadda musqusha ee waarta oo adigu adigoon dhibbayn.
Qaabka iyo fikradda qasabadda musqusha
In kasta oo qaab -dhismeedka gudaha ee qasabadda musqusha ay muhiim tahay, muuqaalka guud ee qasabadda ayaa dadka oo dhan u muuqda. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qasabadda musqusha musqusha. Tuubooyinka musqusha waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, laga bilaabo moodada casriga ah ilaa naqshadda qadiimiga ah ee caadiga ah. Gacmaha qasabadaha waxay u dhexeeyaan levers ama garbaha curcurka ilaa qasabadaha barafka ee siman ee loo isticmaalo jikada oo keliya. Jilbaha iyo gacan qabatooyinka ayaa ah isbeddel kale oo la tixgeliyo. Daaweynta dusha ee qasabadda musqusha musqusha ayaa ah qeybta ugu soo jiidashada badan qeybta qasabadda. Soo -saareyaashu waxay leeyihiin ikhtiyaarro kala duwan, chromium -na waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan. Haddii aad raadinayso qasabad lacag la'aan ah, qasabadda chrome -ga la jajabiyey ayaa noqon doonta doorasho wanaagsan maxaa yeelay ma fududa in la soo saaro wasakhda biyaha. Tuubooyinka musqusha ee naxaasta ah ayaa caan ku ah sida dahaarka chrome, xeerarka midabaynta ayaa quseeya dayactirka qasabadda. Xidhmada qasabadda dhammaadka-sare waxay leedahay dahaar la hagaajiyay si ay kuu siiso biyo-celin, ka-hortag iyo xoqid xoqan. Soo -saaruhu wuxuu bixiyaa daasadda daasadda, nikkel iyo naxaas oo ah kuwa ugu caansan ee dhammaada, iyo sidoo kale dhaldhalaalaan, la caday iyo xitaa matte. Dhammaadka madow ee Matte waa mid aad u gaar ah oo xarrago leh, markaa ha ka baqin inaad tijaabiso muuqaal cusub. Si kasta oo ay tahay qaabka musqusha ee aad rabto inaad gaarto, waxaa jiri doona qasabadda musqusha ee musqusha si loogu kabo qurxinta musqushaada.
Hal -abuurka qasabadda musqusha
Markaad qorsheynayso qaabka iyo naqshadda musqusha iyo qasabadda musqusha musqusha ee ku habboon qorshahaaga, had iyo jeer isku day inaad tixgeliso saxanka qubeyska iyo qalabka qubeyska oo leh qasabadda weelka sida mawduuca. Waxaad ku qurxin kartaa waxyaabo kale, sida gacmo -gacmeedyada, gacan -qabatooyinka, jaakadaha shukumaan iyo xaashiyaha waraaqaha musqusha, iyo xitaa weelka waraaqaha qashinka ah. Haddii aad hareeraha fiiriso, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah xirmooyinka musqusha oo dhammaystiran, ama waxaad dooran kartaa inaad isku dartid oo aad isku dhejisid - kaliya joog mawduuca qalabka qasabadda, si qurxinta ay si fiican isugu sabayn karto.
Hore:: Helitaanka Tubaale iyo Talooyinka Tuubooyinka si loo yareeyo Isticmaalka Biyaha Next: Tuubooyinka Musqusha ee Nikkel -ka la Jeexay - Ikhtiyaar Fiican adiga
2021 / 09 / 24 1421